Ithegi: ukubandakanyeka kwezentlalo | Martech Zone
Ithegi: ukuzibandakanya kwezentlalo
Ngokukhawuleza xa ndibona xa kuthelekiswa nokusetyenziswa kwesihloko senqaku kwintengiso, ndiye ndifumane kancinci. Le infographic ingezantsi ivela kwi-Devesh Design yenza umsebenzi omkhulu wokubeka imfuno yabathengi yokusebenzisa i-imeyile kwinkampani yabo. Andiqinisekanga ngamandla e-imeyile kunye nokukwazi kwayo njengeteknoloji yokuthengisa yokukhuthaza ukukhuthaza ababhalisile ukuba bathathe inyathelo. Iyasebenza… kwaye wonke umntu kufuneka
Isiseko se-infographic silungile kwaye sibi, kodwa andazi ukuba ibethelele isikhonkwane entloko. Izinto ezilungileyo (ezilungileyo) zonke zichanekile kakhulu zixhasa iinzame zentengiso yemithombo yeendaba, kodwa i-cons iyathetha kwizikhewu ekuqondeni, kwisicwangciso kunye nohlalutyo ngaphezulu kokuthengisa ngolwimi. Masizithathe nganye nganye. I-50% ye-C-Suite ayiqinisekanga ngexabiso leendaba zentlalo. Oku kunokuba yimicimbi eliqela.
NgoLwesine, Agasti 1, 2013 NgoLwesihlanu, Agasti 2, 2013 Douglas Karr
Njengothengiso oluninzi kunye nentengiso, ukudibanisa amachaphaza ngamanye amaxesha kunzima phakathi kwento abathengi abayenzayo kunye nenqaku lokuthenga. Ngaphandle kwamathandabuzo, nangona kunjalo, kukho unxibelelwano phakathi komsebenzi wentlalo kunye nokuziphatha kokuthenga. Ii-CMOs ziqala ukufumana uphando ukuba kukho ubangela ... nezinto ezinomdla! Le infographic evela kwi-SocialAnnex, iqonga lokuthengisa kwimidiya yoluntu kwi-ecommerce, ibonelela ngeziphumo eziphambili. Ulwazi olusebenzisekayo lwabathengi, nokuba lukhokela, inani labantu, uvakalelo, umthengi